Dib U Milicso Mid Ka Mid Ah Khubadihii Taariikhda Galay Ee Marxuum Cigaal Jeediyay Wakhtigii Dagaalada Sokeeye! | Berberatoday.com
Dib U Milicso Mid Ka Mid Ah Khubadihii Taariikhda Galay Ee Marxuum Cigaal Jeediyay Wakhtigii Dagaalada Sokeeye!
Hargeysa(Berberatoday.com)-Mid ka mid ah Khudbadihii Taariikhda galay ee uu Madaxweynihii hore ee Somaliland Md. Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal umadda u jeediyey wakhtigii dagaallada sokeeye dalka ka qarxeen 1994-kii ee uu sida gaarka ah ula hadlayay dadka dagaalada abaabulayay ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa dadku ku wadaagayeen baraha xidhiidhka Bulshada wakhti dadku isku baraarujinayo in wixii la soo maray aan umadda dib loogu celin ee hore looga socdo.
Muuqaal Video- ah oo 10 daqiiqo soconaya oo Marxuum Cigaal warbaahintu ka duubtay 1994-kii ayaa waxa uu kaga hadlayaa xaalado nabadda iyo wada jirka umadda u dan ah iyo dardaaran uu umadda ku siinayo in la iska qabto siyaasi danayste ah iyo caaqil isku sheeg aan dhaqan ku iman oo aan waligii talin jirin marka uu talada umadda meel xun mariyo. Marxuum Cigaal oo arrimahaa ka hadlayaa waxa uu yidhi: “Umaddani raas bay ka wada timid oo Nin Sheekh Isaxaaq La Yidhaa baa laga soo wada jeedaa. Meel wax la isku dheeraaday iyo meel la isugu taliyey iyo meel la isku addoonsaday midna aanay jirin. Cid maanta la addoonsanayaana ma jirto. cid cidkale talo uga mudana ma jirto oo ma lihin. Dadkay waxaa ku lugoynayaan oo ay leeyihiin dad talin jiray baa taladii laga qaaday oo dad aan talin jirin baa talinaya. Waxaasi ma jiraan cid talo laga qaaday ma jirto cid kalena ma jirto. Umaddii la fidnaynayo ayaa caqligooda la galiyaa waxbaad dadka dheer tihiin.
Wax Alla wax ay dadkan reer Somaliland is dheer yihiin ma jirto. Wuxuu kala wataana ma jirto. cid meel sare joogtay oo laga soo ridayaana ma jirto cid meel hoose joogtay oo sare la gaynayaana ma jirto. Walaalnimo iyo wax wadaag iyo talo wadaag ayaynu u baahanahay ee kala qaybin umaddani uma baahna. Waxaynu doonaynaa in aynu wax ku dhisano dad manfaca wada leh, madaxnimada wada leh oo danta ka siman. Dadka lagu lugoynayo waa la ina tirayaa ama innaga ayaa fiiro gooniya la innoo leeyahay, waxaan leeyahay waar cid loo leeyahay ma jirto. 7-da nin ee laga doortay Burco ee la yidhi cidbaad madax u tihiin, halkan ayaanu wada fadhiisanay, madaxtooyadan ayaanu wada fadhiisanay. Maalin dhan illaa habeenkii Siddeedii saac ayaanu wada hadlaynay. Markii aanu gacanta isa saari lahayn ee aanu wax walba dhammaysanay ayaa nin raggii ka mid ahi ka kacay fadhiga. Ninkaasi ayaa yidhi Ina Bullaale Wasiirnimada halaga qaado. Ma waxa maanta kun nin u mootan yihiin ina Bullaale Wasiirnimadiisa?. Illayn wax kale oo aynu isku diidnay ma jirtee?. Wasiirnimada inna Bullaale oo waliba isagii maanta iskii uga tagay wasiirnimadii. Wax kale oo aanu 7-daa nin isku diidnay ma jirin. Waana kuwaa maanta fidnada shiday ee dabka umadda kala dhex dhigaya. Dadkaa maanta wax Fidno lagu galiyaa ma jirto. Talo xumadii iyo nacasnimadii laba sano innagu dhaafeen 18-ka bilood ee aynu kordhinay yaanay innagu dhaafin.
Marxuum Cigaal oo hadalkiisa sii wataa waxa uu yidhi: “Talada dadka iyo arrimihiisa Ilaahay baa gooya oo innagu musayiriin baynu nahay. Wixii dhacayaba isagaa maamula oo innaga oo aan dhalan ayuu sii qoray wax kasta oo dunida dhacaya. Ilaahay xikmad buu uga jeedaa. Sidii xaydho weynta dadkan dabka lagu gurayo. Wax faa’iido ah oo ka soo jeeda oo laga gaadhayaa ma jirto. Waxa la yidhi qaarbaa yidhi waan guumoobaynaa oo haddii Burco la innaga saaro waan guumoobaynaa. Sida maanta wax loo wado Burco tii la iska saaro weeyaan. Burco ku eekaan mayso. Haddii xataa laga hadho dalkan la leeyahay ma jiro ee la diidayo. Caaqiibadiisa ayaa xumaan doonta. Isaga ayaa diidi doona oo lagu noolaan maayo. Somaliland ma jirto oo waan ku dhex noolaanayaa socon mayso oo suurto gali mayso.
Waxaan leeyahay maanta cid laga xarrago qaadanayaa ma jirto. cid loo dan leeyahay ma jirto. Nin gurigiisa jooga oo Ilaahay u saciid ahoo dawladdani cadaawad u tahay oo daba socotaa ma jirto. Dadka lasoo carbinayo oo lasoo cayminayo. Maalin dhawayd diyaarad baa tagtay Oodweyne oo gaysay daawo. Raggii meesha joogay waxay yidhaahdeen oo waliba raggaa meesha ka talinaya nin qudha oo Oodweyne ku dhashay kuma jiro, ka ugu sokeeyaa wuxuu ku dhashay Maydh. Waxa ay raggaasi yidhaahdeen Berbera yaan waxba nalooga keenin. Ma doonayno daawada iyo raashinka dadkii Barakacay ee masaakiinta ahaa loo geynayay dooni mayno ayay yidhaahdeen wax Berbera laga keenay. Waxay yidhaahdeen ardal xabash hanalooga keeno. Waxaan garan waayay goorta daawada Berbera sun noqotay ee ka Itoobiya laga keenay daawo noqotay. Goormay Berbera iyo Itoobiya innoo sinmeen?, Xikmadda ku jirtaa maxay tahay?. Waxaan u soo jeedinayaa dadkaasi oo aan dhiig wadaagno oo aan u damqanayo waar nimaan talin jirin baa talinaya. Dad aan talin jirin oo aan ahli u ahayn ayaa talinaya. Dab ayaanay shidayaan. Dabkiina dad bay ku gubayaan aan u baahnayn in lagu gubo. Dadka waa loo abtiriyaa ninkii talinaya. Cudurka la yidhaa xabbadda ninka qaaday wuu waashaa. Quruur baa gala oo wuxuu yidhaa dadka anaa ugu sarreeya oo anaa talinaya. Ninka Suldaanka sheeganaya ee dhulka wareegaya ee qaarkood iska roonaa ee inta loo cimaamaday inta laas caano ah lagu qubay oo lagu daadiyey la yidhi suldaan baad tahay balse dabcigii iyo dhaqankii lagu yaqaanay ka tageen rag ay kuwaasi madax u yihiin baa been ka iibsanaya oo waxa ay u jeedaana tahay lafo maroodi waa la isku jabiyaa. Lafo Maroodi ayaga ayaa la isku jabiyaa. Ma garanayose Suldaan ku sheegaasi.a ma garanayo Suldaan ku sheegaasi. Beentaa loo walaaqayo iyo dhoobadaa indhaha laga saarayo ma garanayo. Maanta waxaan leeyahay waar wax aynu kala wadanaa ma jirto. Waar umaddan sidii xaydho weynta dabka lagu gurayo aan ka dayno. Wax aynu kala wadanaa ma jirto. Anigu iyo dawladda aan ka madaxda ahay sad-bursiiyo iyo dhaqaale iyo u damqasho waxaan ahayn oo aanu dadkaa u haynaa ma jirto. Belaayada la galinayaa wax halkaa laga abuurayo weeyi. Mid dad gaara ka soo fatahaysa weeyi wax uurkooda ku jira ka soo dhacaysa weeyi. Uurka erayga ku jira ayaa afku xadayaa baa la yidhi. Dadkaa belaayada loo sheegayaa ma taallo agtayda. Ba’a la tilmaamayaa ma yaallo halkan iyo agtayda. Meesha lagu leeyahay meel baanu idiin wadnaana wax yaallaa ma jirto. Meel lagugu jecel yahay haddaad ka tagto meel lagugu neceb yahay ayaad tagtaa. Dadkaygaasi dalkan ayay ku yaallaan oo ay u dhasheen oo meel kale aanay heli Karin. Aan dhisano oo aynu u daawaysano. Aynu u sinnaano, aynu u walaalowno, aynu wixii aynu ahayn u noqono. Sidaasi ayay dantu ku jirtaa. Belaayada la shidayo laga faa’iidi maayo. Been yaan la isu sheegin. Somaliland inteedii kale ayaan u babac dhigaynaa waanan ku liibaanaynaa ma suurto galayso been dambe yaan la isu sheegin” ayuu hadalkiisa ku soo koobay Marxuun Maxamed Ibraahim Cigaal.